Waze Local: Wadayaasha Waze Ha U Arkaan Meheraddaada Markay Joogaan | Martech Zone
Arbacada, December 14, 2016 Arbacada, December 14, 2016 Douglas Karr
Markasta oo aan gaadhigayga fuulo, waxa ugu horreeya ee aan sameeyo ayaa ah isku xidhka taleefankayga iyo furitaanka App Waze. Waxay ka sarreysaa dhammaan astaamaha Google (cidda iska leh) oo kaa lumin maayo sida Apple… dhammaantood inta ay halista ku badan yihiin iyo taraafikada waddada. Haddii cagahaagu culus yihiin oo aad isku aragto inaad tikidhada hesho, waa wax aad waxtar u leh maadaama aad labadiinaba soo sheegi kartaan oo aad arki kartaan dabinno xawaare la soo sheegay. The booliisku wuu neceb yahay Waze.
Waze waxay siisaa ganacsiyada aragti sare Waze Local. Diyaarso miisaaniyad maalinle ah iyo qayb ganacsi, meheraddaaduna waxay u dallacday xagga sare ee natiijooyinka raadinta darawallada Macaamiisha ku dhow dhow meheraddaada sidoo kale waa loo soo bandhigaa biinanka calaamadeysan ku calaamadee goobtaada khariidada. Marka isticmaaleyaashu ay taabtaan natiijada, waxaa la siiyaa macluumaad dheeri ah waxayna ku kallifaan inay maraan ama badbaadiyaan goobta.
Waze Local waxay bixisaa dashboard halkaas oo ganacsiyada ay:
Eeg ganacsigooda maalin walba gaadha
Lasoco wax qabadka, oo ay kujirto hagidda iyo keydinta
Cusboonaysii hal-abuurka ololaha, goobaha ganacsiga, iyo miisaaniyadda
Qiimeeyntu waa nooc CPM ah oo ugu yar $ 2 maalintii oo bishii lagu soo dallaco kaarkaaga deynta.
Haddii aad meherad ka tahay in ka badan 10 meelood, waad adigana waad ka faa'iideysan kartaa Xayeysiiska Waze. Iskuxirku wuxuu bixiyaa biinano sumadaysan, shaashada mobilada laga qaato, fallaaro, iyo meelaynta natiijooyinka raadinta ee caan ka ah gudaha mobilada. Waxaad sidoo kale beegsan kartaa nooca darawalnimada iyo meesha ay wadaan, iyo waxa ka dhacaya hareerahooda (sida cimilada!).
Tags: drivingxayeysiinta wadistajuquraafi ahaangismapWazexayeysiis wazeilaaliya deegaanka
Sida Loo Kordhiyo Beddelka Mobiladaada iyo Hoggaaminta
15, 2016 at 10: 22 AM
Waze waxay qaban kartaa shaqo aad ufiican oo muujinaysa lugeeyayaasha, baabuurta, baaskiilka iyo isgoysyada tareenka ee u nugul shilalka. Waxaan haynaa xogta.
15, 2016 at 11: 03 AM
Jeff, miyaad ku riixaysaa iibka? Hadday sidaas tahay, kudos! 🙂